Nagarik Shukrabar - अमेरिकामा ज्यान जोगाउनै मुस्किल
आइतबार, २० साउन २०७५, ०४ : १२ | जाङ्बु शेर्पा
श्रीमान् र अढाई वर्षीय छोरासँगै अमेरिका पुगेकी रचना श्रेष्ठलाई ओक्लाहोमा राज्यको अटोका सिटीको ग्यास स्टेसन नजिकैको स्टोरमा अन्धाधुन्ध ८ राउन्ड गोली हानियो । ११ महिना अगाडि अमेरिका पुगेकी उनी अहिले टल्सा सहरको सेन्ट फ्रान्सिस हस्पिटलमा उपचारपछि डिस्चार्ज भएर आराम तंग्रिने प्रयासमा छिन् ।
ग्यास स्टेसन नजिकैको स्टोरमा भुइँ सफा गरिरहेको बेला उनीमाथि एकाएक गोली प्रहार भएको थियो । घटनालगत्तै उनको उद्धार गरेर हेलिकप्टरमा टल्सा सहरको सेन्ट फ्रान्सिस अस्पतालमा भर्ना गरियो ।
डिभी परेर उनकी श्रीमती तीन वर्षअघि नै अमेरिकी गएकी थिइन् । उनी छोरी लिएर नौ महिना अगाडि मात्र अमेरिका आएका थिए । उनी सुनोको स्टेसनमा रहेको फ्र्याङ्कलिन फार्म रोड हर्नडनमा क्यासियरको काम गर्थे । जुलाई ४ मा प्रहरीले डकैती भएको सूचना पाएर बजगाई काम गर्ने स्थानमा पुग्दा उनको शव भुइँमा लडिरहेको पाएको थियो । प्रहरीले उनको हत्या आरोपमा १९ वर्षीय मोहम्मद ए अब्दुलाहीलाई पक्राउ गरेको छ ।
अमेरिकामा गोली चल्नु नौलो घटना हैन । विद्यालय र सार्वजनिक स्थानहरुमा मास सुटिङ भई नै रहन्छ । सन् २०१८ मा मात्र मास सुटिङका क्रममा ४० जनाको ज्यान गइसकेको छ । वासिङ्टन पोस्टका अनुसार १९६६ अगस्ट १ देखि सन् २०१८ सम्ममा अमेरिकामा १ सय ५८ वटा मास सुटिङका घटना भइसकेका छन् । यस्ता घटनामा १ हजार १ सय २ जनाको ज्यान गएको छ । जसमा गर्भावस्थाकादेखि ९८ वर्षका वृद्धासम्म छन् ।
सन २००९ को सेप्टेम्बर ३० मा अमेरिकाको दक्षिण क्यारोलिनामा मारिएका रवीन्द्र शर्माको पनि स्टोरमा कार्यरत अवस्थामा नै हत्या भएको थियो । राति दश बजे स्टोर प्रवेश गरेका एक सशस्त्र लुटेराले शर्मासहित एक मेक्सिकोबासी कामदारलाई हत्या गरेका थिए । ४० वर्षीय शर्माले तीन महिनाअघि मात्र कृष्ण कँडेलसँग मिलेर स्टोरको व्यवस्थापन गर्दै आएका थिए ।
सन २००९ जनवरी ६ मा अमेरिकाको टेक्ससमा जसबहादुर राई मारिए । उनलाई पनि लुटेराले नै हत्या गरेका थिए । बिहानीको समयमा स्टोर प्रवेश गरेका लुटेराले राईमाथि पटक–पटक छुरा प्रहार गरेका थिए । सख्त घाइते राईको जोन पिटर हस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो ।
सन २००८ को अक्टोबर ९ मा टेक्ससमा नेपाली नागरिक अशोक भट्टराई मारिए । उनी विद्यार्थी थिए । टेक्सासको ह्युस्टन सहरमा खाद्य स्टोरमा रात्रिकालीन समयमा काम गरिरहेका अशोकलाई १७ वर्षीय रेमन्ड रिचले गोली हानेर मारेका थिए । हत्यासँगै रिचले स्टोरबाट पाँच हजार डलरसमेत लुटेका थिए ।
अर्का नेपाली देवेन्द्र देवकोटा फ्रिवेको स्टोरमा काम गर्न झन् गाह्रो हुने गरेको बताउँछन् । सुनसान स्थान भएकाले भनेको बेलामा प्रहरीसमेत आइनपुग्ने अनुभव सुनाउँदै उनले भने, ‘प्रायः यस्ता घटनामा अफ्रिकी मूलका संलग्न देखिन्छन् । त्यसैले आफ्रिकी मूलका ग्राहक आउँदा झन् डर हुन्छ ।’
अमेरिकामा रहेको हाम्रो नेपाली समाज मिकिनी टेक्ससका अध्यक्ष केशव रेग्मी भाषा नजाने पनि काम गर्न सकिने र ओभर टाइमसमेत हुने भएकाले नेपालीमाझ ग्यास स्टेसन र स्टोरको रोजगारी आकर्षक बनेको तर जोखिम पनि उत्तिकै रहेको बताउँछन् ।
ग्यास स्टेसन र खुद्रा सामानको कारोबार हुने स्टोरमा नगद हुने र नगदको कारोबार हुने स्थान लुटेराको टार्गेटमा पर्ने भएकाले यस्ता ठाउँमा काम गर्ने कामदार सधैँ उच्च सुरक्षा जोखिममा रहने गरेको उनले बताए ।
‘लुटेराले आक्रमण गरेको खण्डमा प्रतिकार नगरी उसलाई छाडिदिने गर्दा सुरक्षित हुन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तर यहाँ अमेरिकामा आए पनि नेपालीले बहादुरी देखाउँदै लुटेराको प्रतिकार गर्ने भएकाले ज्यान जाने गरेको छ ।’
यस्ता स्टोरको बिमा हुने गरे पनि होस नपुर्याई बहादुरी देखाउन खोज्दा ज्यानै जोखिममा पर्ने नेपालीको संख्या उल्लेख्य रहेको रेग्मीले बताए । सुरक्षाको ज्ञानको अभावले समेत यस्तो हुने गरेको रेग्मीको मत छ ।
‘लुटेराले जे भन्छन्, त्यही मान्नुको विकल्प छैन,’ भर्जिनियाको एक स्टोरमा कार्यरत नवराज अधिकारीले भने ।
सवारी दुर्घटना पनि उस्तै
स्टोर र ग्यास स्टेसनमा काम गर्दा लुटेराको निशानामा परेर ज्यान गुमाउने नेपालीको संख्यासँगै सवारी दुर्घटनामा मारिनेको संख्या पनि कम छैन । तीव्र गतिमा सवारी चलाउँदा, असावधानीवस हुने यात्राका क्रममा भएका दुर्घटनामा नेपालीको ज्यान जाने क्रम पनि उत्तिकै छ । सन् २०१८ जनवरीमा भएको सवारी दुर्घटनामा रुपेश उप्रेती र सन् २०१६ डिसेम्बरमा भएको कार दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने सरिता शाक्य निधन दर्दनाक थियो ।
सोही महिनाको १५ तारिकमा भएको सवारी दुर्घटनामा एलिसा पण्डितको ज्यान गयो । ममता कँडेल सन् २०१६ डिसेम्बरमै दुर्घटनामा मारिइन् । सन् २०१६ को नोभेम्बरमा भएको दुर्घटनामा चिरञ्जिवी खनाल, श्याम खनाल, रिचा खनाल र सम्रिका पन्तको ज्यान गयो ।
जुलाईमा कारले ठक्कर दिँदा किरण लामिछानेको ज्यान गयो । रुसल श्रेष्ठ, उर्मिला शर्मा, मञ्जु गुरुङ पनि सडक दुर्घटनामा मारिएका थिए । अमेरिकामा पुगेर सुन्दर जीवन बनाउने सपना बुनेकाले आत्महत्यासमेत गर्ने गरेका छन् । पछिल्लो समय भुटानी नागरिकमा आत्महत्याको दर बढ्दो छ ।
टप ५ क्राइम सिटी
१. सेन्ट लुइस मिजुरी
हत्याः प्रति लाख जनसंख्यामा ५९ दशमलव २९
सन् २०१५ मा १ सय ८८ को हत्या
२. बाल्टिमोर मेरिल्यान्ड
हत्याः प्रति लाखमा ५५ दशमलव ३७
सन् २०१५ मा ३४४ को हत्या
३. डेट्रोइट, मिचिगन
हत्याः एक लाखमा ४३ दशमलव ८२
सन् २०१५ मा २ सय ९५ को हत्या
४.न्यु ओर्लिन, लुजियाना
हत्याः एक लाखमा ४१ दशमलव ६८
सन् २०१५ मा १६४ को हत्या
५. बर्मिंगम, अलाबामा
हत्याः प्रति लाखमा ३७ दशमलव २१
सन् २०१५ मा ७९ को हत्या
अमेरिकाको पाँच ठूला हत्या
५८ – सन् २०१७ को अक्टोबरमा लस भेगासमा ६४ वर्षीय स्टेफन प्याडकले २२ हजारको भिडमा गोली चलाउँदा ५८ जनाको मृत्यु ।
४९ – सन् २०१६ जुन १२ मा ओमार सिद्धिकीले गे क्लबमा गरेको गोली प्रहारमा ४९ जना मारिए ।
३२ – सन् २००७ अप्रिल १६ मा भर्जिनियामा २३ वर्षीय विद्यार्थी साङ हुइ चोले गोली प्रहार गर्दा ३२ जनाको मृत्यु । गोली प्रहारपछि हत्याराले आत्महत्या गरेका थिए ।
२७ – सन् २०१२ डिसेम्बर १४ मा स्यान्डी हुक इलिमेन्ट्री स्कुलमा आडम लान्जले गरेको गोली प्रहारमा बालबालिकासहित २७ जना मारिएका थिए ।
२५– साउथरल्यान्ड स्प्रिङ चर्चमा सन् २०१७ नोभेम्बर ५ मा भएको गोली प्रहारमा गर्भमा रहेको एक बालकसहित २५ जना मारिएका थिए ।